Tsipika famokarana roa
Ny iray dia ny tsipika famokarana anti-ultrasonika mitohy ankehitriny ary ny iray dia tsipika famokarana tankina fampiasa maro
Rehefa vita ny famokarana sy ny famitana ny fitiliana mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatrao, halefanay ny vokatrao ao anatin'ny 7 andro amin'ny datin'ny kaomandinao voalohany. Ny vokatra rehetra dia notohanana niaraka tamin'ny antoka 2 taona.
Ekipa matanjaka matanjaka
Fitaovana fanandramana mandroso (HPLC, GC… sns) sy fotodrafitrasa ary nametraka rafitra fitantanana kalitao henjana. Ny fanaraha-maso eo an-toerana avy amin'ny QA sy ny fanandramana kalitaon'ny dingana rehetra ataon'ny QC.
Tonga lafatra aorian'ny fanompoana
Rafitra fitantanana tanteraka aorian'ny fivarotana. Andao hanohana ny fitakian'ny orinasanao amin'ny serivisy haingana. Azo omena santionany maimaimpoana ary valiny haingana.